September 2020 - Latest Myanmar News
September 24, 2020 Latest Myanmar News 0
ဝမ်းချုပ်နေသူများသက်သာအောင် မနက် အိပ်ရာထ သောက် ရေ ၃ ခွက် ဆက်တိုက်သောက်ပေးခြင်းက အူတွေကို အလုပ် လုပ်စေလို့ ဝမ်းသွားစေပါတယ် – နေ့စဉ် ရေ ၈ ခွက် မှ ၁၀ ခွက်အထိ သောက်တဲ့ အကျင့်ကို မွေးယူပါ သံပုရာသီးမှာ […]
September 23, 2020 Latest Myanmar News 0
အိ မ်မက် အမျို;မျိုးရှိပါတယ်။တစ်ချို့ အိမ်မက် တွေ က ရှေ့မှာ ဖြစ်လာ တော့မယ့် အရာတွေကို နိမိတ် ပြတဲ့ အိမ်မက် မျိုးတွေရှိပါတယ်။ ဒီလို အရာ တွေကို မယုံကြည်တဲ့ လူမျိုးတွေ ရှိ ကောင်းရှိ နိုင် ပေမယ့် အပြင် မှာ […]
September 22, 2020 Latest Myanmar News 0
ရိုး တွင်း ချဉ်ဆီအတွက် သဘာဝဆေးနည်း “ဒူးနာခြင်း ‌ခြေကျင်းဝတ်‌ နာကျင် ‌ကိုက်‌ခဲခြင်းအတွက် ” ဒူးနာခြင်း ခြေကျင်းဝတ်နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းတိုသည် အသက်‌အရွယ်‌မ‌ရွေးဖြစ်‌တတ်‌‌ပါသည်။ အသက်‌၄၀‌ကျော်‌ပြီး အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများတွင်‌ ရိုးတွင်းချဉ်‌ဆီ ခမ်း‌ခြောက်‌လာခြင်း‌ ကြော င့်‌ပိုပြီးတော့ အဖြစ်‌များ တတ်‌သည်‌ ။ ထိုသို့ဖြစ်‌လာလျှင်_ကိုယ်တွေ့ဆေးနည်းလေးကိုပြောပြပါရ​စေ ။ “ဆေးနည်း […]
September 21, 2020 Latest Myanmar News 0
နတ် ဆေးလို့ခေါ်ထိုက်တဲ့ ရွက်ကျပင်ပေါက်ဆေးအစွမ်း ကျမ်းကိုး မြန်မာ့ဆေးဝါးပင် ရုက္ခဗေဒ အမည် – Bryophyllum Calycinum. Salisbအရည်ရွှမ်းသော နှစ်ရှည်ခံ ပင်ငယ် သက်ပြင်းမျိုး ဖြစ်သည်။ ထူးခြားသည်မှာ ရွက်ဖျားပတ်ပတ်လ ည် အရွက်ပိုလေးများသည် မြေသို့ကျရာမှ မျိုးစေ့ သဖွယ် အပင်ပြန်ပေါက်၍ ရွက်ကျပင်ပေါက်ဟုခေါ်ဟန်ရှိသည်။ အချို့က […]
September 20, 2020 Latest Myanmar News 0
ရေတော်(၅)မျိုး ဆိုသည်မှာ ၁။ မျက်နှာသစ်တော်ရေ ၂။ သောက်တော်ရေ ၃။ သုံးတော်မူရေ ၄။ ချိုးတော်ရေ ၅။ ခြေဆေးတော်ရေ ရေတော် (၅)မျိုးကို ဆက်ကပ် လှူဒါန်းခြင်း၏ အကျိုးရလဒ်များမှာ – ဘ၀ မှာ အေးချမ်းမှူတွေ ရရှိခြင်း ၊ အလုပ်ကိုင် အကြံအစည် […]
September 19, 2020 Latest Myanmar News 0
နားအေ ကြာင်း နားနဲ့ပတ်သက်ပြီး အပြုလုပ်သင့်သော အရာများ နားတွေမှာ သူ့ဖာသာသန့်စင်စေခြင်းနဲ့ သူ့ဖာသာ ကာကွယ်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ သဘာဝသတ္တိရှိပြီးသားပါ။ နားဖာချေးက သဘာဝအရ နားကို စွတ်စိုပေးသောအရာဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် နားတွေကို မမှန်ကန်တဲ့နည်းတွေနဲ့ သန့်ရှင်းဆေးကြောမူ ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ နားမှာထိခိုက် ဒါဏ်ရာ ရခြင်းနဲ့ နားတွင်းကူးစက်ပိုးဝင်ခြင်းဆိုတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ( ၁ […]
September 18, 2020 Latest Myanmar News 0
ကြွ က်နို့ လက်တွေ့ပျောက်ဆေး (5) ရက်အတွင်းလုံးဝပျောက်ပါသည်..။ ဒီဆေးနည်းလေးကတော့ကျွန်မ မျက်မြင်ဆေးနည်းလေးဖြစ် တာကြောင့် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မမောင်လေးခြေထောက်မှာကြွက်နို့ပေါက်တာ သုံးလုံးထိဖြစ်လာပါရဲ့။ဆေးနည်းတွေစမ်းကြည့်ပေမဲ့မပျောက်ပါဘူး။ မုံထူး ကျေးရွာက ကိုညိုမောင်ပြောပြတဲ့ဆေးနည်းနဲ့သုံးရက်ပဲကြာပါတယ် ကြွက်နို့လုံးဝပျောက်သွားပါတယ်။ကိုယ်တိုင်ကြွက်နို့ပေါက်တဲ့မောင်လေးက စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့လိမ်းနည်းအဆင့်ဆင့် အပြင် ခြံထဲကဧကရာဇ်အပင် အမြစ်တို့ကိုပါ ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးလို့ သေသေချာချာတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူ့ခြေထောက်မှာကြွက်နို့ကအမာရွတ်လောက်ပဲထင်ကျန်ခဲ့ပါတော့တယ်။ ဆေးနည်းကတော့ ဆန်အနည်းငယ်ယူပါ.. ရေအနည်းငယ်ဖြင့်ဖျော်ပါ(မည်သည့်ဆန်မဆို) […]
September 17, 2020 Latest Myanmar News 0
ကို ဗစ်ကာလအတွင်း မဖြစ်မနေရုံးသွားရမယ်ဆိုလျှင် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များ အိ မ်အပြင်သို့ ထွက်ရာတွင် ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းစည်း (Mask) နှင့် Face Shield တို့ကို မဖြစ်မနေ စနစ်တကျ တပ်ဆင်သွားပါ။ နာရီနဲ့ အခြားသော accessories များကို အိမ်မှာပဲ ချွတ်ထားခဲ့ပါ။ မိန်းကလေးများအနေဖြင့် ဆံပ […]
September 16, 2020 Latest Myanmar News 0
နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားစေခြင်း နဲ့ဓာတ်စာဆေးနည်း ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း ၊ပြည့်ဝဆီများစားခြင်း ၊Cholesterol သွေးထဲတွင်များခြင်း သွေးတိုး ခြင်း ၊ဆီးချိုရောဂါဖြစ်ခြင်း မျိုးရိုးလိုက်နှလုံးရောဂါဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့်နှလုံးရောဂါရနိုင်ပါတယ် ကြိုတင်ကာကွယ်နည်း အဆီအနှစ်နည်းသောဆန် ၊အသီးအနှံ ၊ဟင်းသီးဟင်းရွက် ၊အဆီမပါသောအသား ၊အချိုနည်းသောအစားအစာကိုစားပါ သံပုရာရည်ဖျော်သောက်ပါ။ နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခဏ်းအနည်းဆုံးမိနစ် ၂၀လုပ်ပေးပါ ဆေးလိပ် အရက် အသင့်သောက်အချိုရည်များရှောင်ပါ။ နှလုံးရောဂါ ဓာတ်စာဆေးနည်း မောပန်းခြင်း […]
September 15, 2020 Latest Myanmar News 0
လျော့ေ ပါ့ပင်စင်အသက် ၅၅ နှစ်ပြည့်ပြီး လုပ်သက် ၂၀ နှစ်ကျော်လျှင် သော်လည်းကောင်းအသက် ၅၀ နှစ်ပြည့်ပြီး လုပ်သက် ၂၅ နှစ် ကျော်လျှင်လည်းကောင်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။ ပင်စင် ပင်စင်ဟူသောစကားရပ်တွင် ပင်စင်+လုပ်သက်ဆုငွေ ဖြစ်ပါသည်။ ၁. သက်ပြည့်ပင်စင် ဝန်ထမ်းသည် အသက် ၆၀ ပြည်ု့သည့်နေ့တွင်အငြိမ်းစားယူရမည်ဖြစ်သည်။ […]